मदिरा खाँदा भएको विवादले बाटोमा भूजको हत्या « Farakkon
तुलसीपुर , जेठ १८ । तुलसीपुरमा शनिवार विहान मृत फेला परेका युवालाई उनकै साथीहरुले हत्या गरेको तथ्य प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरि २९ बर्षीय मन्दिप भूजको हत्या संगै मदिरा सेवन गरेका उनकै साथीहरुले गरेको जानकारी दिएको हो । इप्रका प्रमुख डिएसपी हरिहरनाथ योगीले मदिरा सेवन गर्दा भूजले गाँजा खान थालेपछि भएको विवादका कारण चारजनाले मिलेर बाटोमा भूजको ढुँगाले हानेर हत्या भएको जानकारी दिए ।
तुलसीपुरको अटो भिलेज नजिकै रहेको तुलसीपुर ९ को चौधरी होटेलमा संगै बसेर घरेलु मदिरा सेवन गर्ने क्रममा भूजले मदिरा सेवन पछि गाँजा खान थालेपछि अर्घाआँची जिल्लालको ढिकपुरा वडा नं. ४ घर भइ हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ निवासी सौरभ पोख्रेलले किन गाँजा खाएको हामीलाई डिस्टर्व गर्ने भन्दै हकारे । हत्या गरिएका भूजले तैलेपनि त पहिला खान्थिस, मलाई मात्रै गाँजा खान्छस भन्ने भनेर जवाफ फर्काए । त्यही विषयमा दुबै पक्षका बीचमा बादविवाद भयो । यद्यपी पोखरेल छुट्टै टेवुलमा बसेर साथीहरु संगै मदिरा सेवन गरिरहेका थिए । त्यसपछि उनीहरु रातको दश बजेतिर घरजान भनि होेटेल वाट निस्किए ।
साथमा तुलसीपुर–५ निवासी अजय बुढाथोकी, आशिष नेपाली, तुलसीपुर १८ का ओमबहादुर सार्कीपनि थिए । विवाद गर्दै जाने क्रममा तुलसीपुर ५ स्थित ज्ञानज्योति आधरभूत विद्यालय नजिकै पोख्रेलले भूजको टाउकोमा ढुँगाले टाउकोमा हिर्काए । अनि पोख्रेलले नै उल्टै भूजले आफुलाई हान्यो भन्ने दोषारोपन गरे । त्यसपछि संगै रहेका बुढाथोकी, नेपाली र सार्कीले पनि भूजमाथि हात र मुक्काले हिर्काए । भूज ढले । पुनः पोख्रेलले पहिले हानेकै ढुँगाले कञ्चट र अनुहारमा ढुँगाले हाने । उनैले ढुँगाले टाउकोमा प्रहार गरेपछि भूजको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनको हत्यमा प्रयोग भएको ढुँगा चारै जनाले सल्लाह गरि घटनास्थल भन्दा ४० मिटर उत्तर पश्चिमको पातुखोलामा बालुवाले छोपेर लुकाए । घटनावारे कसैलाई नभन्ने भनी चारै जनाले सल्लाह गरि त्यसपछि घर–घर गएको कुरा अनुसन्धान वाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले शनिवार नै अभियुक्त चारैजनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुका विरुद्ध कतव्र्य ज्यान शिर्षकमा मुद्दा चलाउने भएको छ ।
तुलसीपुर ९ मा डेरागरी बस्दै आएका भुज शनिवार विहान तुलसीपुर ५ बसपार्कस्थित एउटा विद्यालय नजिकै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको टाउकोमा गहिरो घाउ थियो । प्रहरीले त्यसैको आधारमा अनुसन्धान गर्न संगै मदिरा सेवन गरेका ७ जनासहित होटेल साहुनीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । भूजको हत्यामा अन्य चारजानको भने कुनैपनि संलग्नता नदिएकपछि प्रहरीले उनीहरुलाई शनिवार नै छोडेको हो ।
हत्यामा प्रयोग भएको ढुँगा समेत बरामद गरि प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले हत्या भएको केही घन्टा मै सबै आरोपितलाई पक्राउ गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए उनले प्रहरी अधिकारीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ कामगर्न आग्रहपनि गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण इप्रका तुलसीपुरका प्रबक्ता प्रहरी निरिक्षक चक्रडम्मर पालले गरेका थिए ।